ပေကျင်းမြို့မှာ ကားအရမ်းပိတ်တယ်။ | Language Century Language Century
Easy Learning for Chinese, English and Japanese
Ever English Magazine
2:34 AM C-Joke , Chinese
ကားပိတ်ချက်က9လောက်ရှိတယ်။ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း ရှိတယ်။ မြန်ချင်ရင် လမ်းဆင်းလျှောက်ပါ။
小 王 问 正 在 北 京 工 作 的 小 张 ：“ 你 老 说 堵 车 ，北 京 真 的 有 那 么 堵 吗 ？”
ပေကျင်းမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Xiao Zhang ကို Xiao Wang က မေးလိုက်တယ် " မင်းက ကားပိတ်တယ်ချည်းပဲ ပြောနေတယ်၊ ပေကျင်းက အဲဒီလောက် တကယ်ပိတ်လို့လား။ "
小 张 说 ：“ 这 么 跟 你 说 吧 。有 一 天 ，我 下 班 回 家 ，在 车 上 坐 了 45 分 钟 。后 来 ，经 理 有 事 叫 我 回 去 一 下 ，我 下 了 车 走 了5分 钟 就 到 公 司 了 。你 说 北 京 堵 不 堵 ？”
Xiao Zhang က ပြောတယ် " ဒါဆို မင်းကို ငါပြောမယ်၊ တရက်တော့ ငါ ရုံးဆင်းပြီး အိမ်ပြန်သွားတယ်၊ ကားစီးလာတာ ၄၅ မိနစ် ရှိသွားပြီ၊ နောက်တော့ မန်နေဂျာက ကိစ္စရှိလို့ဆိုပြီး ငါ့ကို ခဏပြန်လာခိုင်းတယ်၊ ငါ ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ၅ မိနစ် လမ်းလျှောက်တာနဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရောက်သွားတယ်၊ ပေကျင်းမှာ ကားပိတ်မပိတ် မင်းပြောကြည့်လေ "
1. 北京〔Běijīng〕 ပေကျင်းမြို့
3. 多〔duō〕ဘယ်လောက်လဲ။ များသော
5. 小王〔Xiǎo Wáng〕လူအမည်
6. 问〔wèn〕 မေးမြန်းသည်
7. 正在〔zhèngzài〕 နေတုန်း။ နေဆဲ
8. 工作〔gōngzuò〕အလုပ်။ အလုပ်လုပ်သည်
9. 小张〔Xiǎo Zhāng〕လူအမည်
10. 老〔lǎo〕... ချည်းပဲ။ အိုမင်းသော
11. 说〔shuō〕 ပြောသည်
14. 那么〔nàme〕ဒီလောက်။ ဒါဆိုရင်
15. 这么〔zhème〕ဒီလောက်။ ဒါဆိုရင်
16. 跟〔gēn〕နဲ့။ နဲ့အတူ
18. 有一天〔yǒu yìtiān〕တနေ့မှာ
23. 了〔le〕ပြီးပြီ။ ခဲ့တယ်
24. 45分钟〔sìshíwǔ fēnzhōng〕၄၅ မိနစ်
25. 后来〔huílái〕 ပြန်လာသည်
28. 叫〔jiào〕 ခေါ်သည်
29. 回去〔huíqù〕 ပြန်သွားသည်
30. 一下〔yíxià〕ခဏ။ တချက်လောက်
32. 走〔zǒu〕 ခြေကျင်လျှောက်သည်
33. 5分钟〔wǔ fēnzhōng〕၅ မိနစ်
35. 到〔dào〕 ရောက်သည်
ကားပိတျခကျြက9လောကျရှိတယျ။ အကောငျးဆုံး နညျးလမျး ရှိတယျ။ မွနျခငျြရငျ လမျးဆငျးလြှောကျပါ။
ပကေငျြးမှာ အလုပျလုပျနတေဲ့ Xiao Zhang ကို Xiao Wang က မေးလိုကျတယျ " မငျးက ကားပိတျတယျခညျြးပဲ ပွောနတေယျ၊ ပကေငျြးက အဲဒီလောကျ တကယျပိတျလို့လား။ "
Xiao Zhang က ပွောတယျ " ဒါဆို မငျးကို ငါပွောမယျ၊ တရကျတော့ ငါ ရုံးဆငျးပွီး အိမျပွနျသှားတယျ၊ ကားစီးလာတာ ၄၅ မိနဈ ရှိသှားပွီ၊ နောကျတော့ မနျနဂြောက ကိစ်စရှိလို့ဆိုပွီး ငါ့ကို ခဏပွနျလာခိုငျးတယျ၊ ငါ ကားပျေါကဆငျးပွီး ၅ မိနဈ လမျးလြှောကျတာနဲ့ ကုမ်ပဏီကို ရောကျသှားတယျ၊ ပကေငျြးမှာ ကားပိတျမပိတျ မငျးပွောကွညျ့လေ "
1. 北京〔Běijīng〕 ပကေငျြးမွို့
3. 多〔duō〕ဘယျလောကျလဲ။ မြားသော
5. 小王〔Xiǎo Wáng〕လူအမညျ
6. 问〔wèn〕 မေးမွနျးသညျ
7. 正在〔zhèngzài〕 နတေုနျး။ နဆေဲ
8. 工作〔gōngzuò〕အလုပျ။ အလုပျလုပျသညျ
9. 小张〔Xiǎo Zhāng〕လူအမညျ
10. 老〔lǎo〕... ခညျြးပဲ။ အိုမငျးသော
11. 说〔shuō〕 ပွောသညျ
14. 那么〔nàme〕ဒီလောကျ။ ဒါဆိုရငျ
15. 这么〔zhème〕ဒီလောကျ။ ဒါဆိုရငျ
16. 跟〔gēn〕နဲ့။ နဲ့အတူ
18. 有一天〔yǒu yìtiān〕တနမှေ့ာ
23. 了〔le〕ပွီးပွီ။ ခဲ့တယျ
24. 45分钟〔sìshíwǔ fēnzhōng〕၄၅ မိနဈ
25. 后来〔huílái〕 ပွနျလာသညျ
28. 叫〔jiào〕 ချေါသညျ
29. 回去〔huíqù〕 ပွနျသှားသညျ
30. 一下〔yíxià〕ခဏ။ တခကျြလောကျ
32. 走〔zǒu〕 ခွကေငျြလြှောကျသညျ
33. 5分钟〔wǔ fēnzhōng〕၅ မိနဈ
35. 到〔dào〕 ရောကျသညျ
Source: Du Chinese
မြန်မာ-ဂျပန်၊ ဂျပန်-မြန်မာ အဘိဓာန်။
Apk အမည် - Kotoba 9000.apk File Size - 6.1 MB Download Link - ဒီမှာ Click နှိပ်ပါ။ ဒီအဘိဓာန်လေးအကြောင်းကိုတော့ အထွေအထူးမပြောတေ...
တရုတ်ဘာသာစကား အဝေးရောက် ပို့ချမှု။
သင်တန်းလာတက်ရန် မအားလပ်ကြသူများ၊ နယ်ဝေး သို့မဟုတ် နိုင်ငံရပ်ခြားမှ လေ့လာလိုကြသူများအတွက် တရုတ်စကားလေ့လာရန် အဆင်အပြေဆုံး အစီအစဉ်ကောင်းလေ...
တရုတ်လူမျိုးတွေမှာ သားယောင်္ကျားလေးတွေက မိဘဘိုးဘေးတွေရဲ့ မျိုးနွယ်ကို အစဉ်အဆက် ခံယူရပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ...
တရုတ်စကားပြောစာအုပ် - Chinese Lite
ဒီနေ့ ပေးချင်တဲ့ Mobile Application လေးကတော့ တရုတ်ဘာသာစကားလေ့လာနေကြသူများအတွက် အထောက်အကူပြုပေးနိုင်တဲ့ တရုတ်စကားပြောစာအုပ် App လေးပါ။ ...
နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်နီးပါး အောင်မြင်စွာ ရပ်တည်နေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပညာဒါနကျောင်းကို ကြွလှမ်းခဲ့ပါနော်။ ကမ္ဘာ့ဒုတိယဘာသာစကားဖြ...
တရုတ်စာရေးနည်း- Pdf စာအုပ်။
တရုတ်စာလုံးတွေရဲ့ စုတ်ချက်တွေကို မှတ်ရခက်နေပါသလား။ စုတ်ချက်တွေကို ဘယ်က ဘယ်လိုစပြီး ဆွဲရမယ်ဆိုတာ အခက်အခဲ တွေ့နေပါသလား။ တရုတ်စာလေ့လာသူ မ...
တရုတ်စာ ရေးမယ် - 心
တရုတ်စာလုံး ရေးရတာ စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ တရုတ်စာလုံးတွေရဲ့ စုတ်ချက်ဆွဲနည်း အဆင့်ဆင့်နဲ့ ဆက်စပ်ဝေါဟာရတွေကို လေ့လာကြရမှ...
တရုတ်သိုင်းဇာတ်ကားများထဲမှ အထင်ကရရှိသည့် သိုင်းပညာများ -အတွဲ ၂။
တရုတ်သိုင်းဇာတ်ကားများထဲမှ အထင်ကရရှိသည့် သိုင်းပညာများ - အတွဲ ၂။ Credit - မှတ်စုကြမ်း ကျိူ့ရင်းကျန်းကျင်းနှင့် ကျိူ့ရန်ကျန်းကျင်...
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပန်းအမျိုးအစားများစွာရှိပြီး၊ အရောင်အသွေး၊ အနံ့အဆင်းပေါင်းစုံ ရှိကြပါတယ်။ ပန်းအမည်များကို တရုတ်လို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။ 一串红 ...
မြန်မာ့ ဆယ့်နှစ်လရာသီ ပွဲတော်များ။
မြန်မာ့ရိုးရာဓလေ့ ပွဲတော်တွေဟာ တန်ခူးလကနေ တပေါင်းလအထိ ဆယ့်နှစ်လရာသီလုံးမှာ တစ်မျိုးစီ ရှိနေကြပါတယ်။ 缅历一月 miǎn lì yī yuè မြန်လိ ယီးယွဲ...
► 2017 ( 414 )
▼ 2016 ( 1180 )
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(153) 没
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(152) 叫
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(151) 玩
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(150) 电
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(149) 晚
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(148) 方
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(147) 安
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(146) 公
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(145) 为
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(144) 因
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(143) 说
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(142) 学
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(141) 今
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(140) 布
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(139) 年
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(138) 亮
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(137) 问
iPhone7အလုံးနှစ်ဆယ်နဲ့ ကောင်မလေး။
တဖက်က တောင်းဆိုချက်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း။
ငွေပေးချေခြင်း စနစ်အကြောင်းကို ဆွေးနွေးကြခြင်း။
ဈေးဝယ်သူရဲ့ ထင်မြင်ချက်ကို အကြံပြုပြောကြားခြင်း။
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(136) 很
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(135) 衣
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(134) 脸
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(133) 片
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(132) 常
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(131) 坐
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(130) 田
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(129) 从
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(128) 竹
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(127) 爷
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(126) 亲
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(125) 同
ဒီနေ့ တရုတ်စာလုံး(124) 们
C-Advertisement ( 10 ) C-Album ( 74 ) C-Apps (9) C-Dialogue ( 161 ) C-Draw ( 341 ) C-ebook ( 12 ) C-Grammar ( 92 ) C-Idiom ( 37 ) C-Joke ( 15 ) C-Knowledge ( 99 ) C-News ( 11 ) C-Pinyin ( 13 ) C-Quiz ( 46 ) C-Sentence ( 189 ) C-Songs ( 127 ) C-Text ( 81 ) C-Video ( 152 ) C-Word ( 322 ) Chinese ( 1736 ) E-Advertisement (6) E-Apps ( 1 ) E-Dialogue ( 35 ) E-ebook (2) E-essay ( 12 ) E-everenglish ( 31 ) E-Grammar ( 26 ) E-Idiom ( 13 ) E-Joke ( 17 ) E-Knowledge (5) E-Letter Writing ( 12 ) E-News (3) E-Quiz (4) E-Sentence ( 55 ) E-Songs ( 10 ) E-Video ( 1 ) E-Word (7) English ( 228 ) Grade-11 ( 13 ) J-Advertisement (3) J-Apps ( 14 ) J-Dialogue (5) J-ebook ( 1 ) J-Grammar (9) J-Kana ( 31 ) j-kanj ( 1 ) J-Kanji ( 43 ) J-Knowledge ( 46 ) J-News (3) J-Quiz (3) J-Sentence ( 45 ) J-Songs (6) J-Text (3) J-Video ( 1 ) J-Word ( 10 ) Japanese ( 222 )
Online Learning Facebook Group.Online သင်ခန်းစာပို့ချမှုများ
တရုတ်စကားပြောပညာဒါနသင်တန်း မနောရမ္မ ပညာဒါနကျောင်း
Ever Top Foreign Language Center
Copyright © 2013. Language Century - All Rights Reserved
Template Created by Language Century